Ngaphambi kokuba siqale, ake sithathe isikhashana ukuze sizijwayeze ngesimo sendawo. Ngokuqondene nendawo, isifunda esikhulu saseRichtersveld singasho ukuthi sakha isikwele esinqabile ekhoneni eliphezulu lesokunxele seNingizimu Afrika. Imingcele yalesi sikwele yile ndlela elandelayo: umngcele osentshonalanga izwe lasolwandle i-Atlantic, kusukela e-Alexander Bay kuya ePort Nolloth; eningizimu, ngumgwaqo u-R382 ogijima ukusuka ePort
Nolloth uya eSteinkopf (owawungaphambili isiteshi esiphakeme cishe amakhilomitha angamashumi ayisishiyagalolunye ngaphakathi); entshonalanga, umgwaqo omkhulu we-N7 osukela eSteinkopf ukuya emngceleni waseNamibia eViolsolsdrift; futhi enyakatho, uMfula i-Orange (noma !Gariep, okusho ukuthi 'umfula omkhulu' olimini lwesiNama) futhi lo mgomo omkhulu wamanzi ubonisa umngcele wamazwe phakathi kweNingizimu Afrika neNamibia.
Ukukhuluma kwezombangazwe, iNamibia eningizimu ayiyona ingxenye yeRichtersveld, kodwa ukukhuluma ngokwezemvelo, kufana kakhulu. Ehlangothini lwaseNingizimu Afrika emngceleni, idolobha elikhulu eliseduze kakhulu, umthombo wasehlane onothuli weSpringbbok, engaba amakhilomitha angamashumi ayisithupha eningizimu yeSteinkopf emgwaqweni omkhulu we-N7.
I-Richtersveld Community Conservancy iphakathi nendawo yalesi sikwele, umkhawulo indawo yokondla izifuyo eningizimu nasentshonalanga, emgwaqeni omkhulu we-N7 kanye neNababiep Nature Reseve eMpumalanga, neMillanderre Mountain kuya enyakatho. Ngaphesheya kwezintaba zaseVandersterre kukhona iRichtersveld National Park, efinyelela emfuleni u-Orange. Izwe eliphakathi kolwandle kanye nalezi zindawo ezimbili zokulondolozwa zigcinwe ngezandla zangasese futhi zisetshenziselwa imigodi.
Uma sisabalala kancane, sizobona ukuthi i-Richtersveld itholakala ekhoneni eliphezulu kwesobunxele esifundeni saseNamaqualand esikhulu. Leli gama elingenakuqhathaniswa lingachazwa ngezindlela ezahlukene. Njengoba uWillem Steenkamp elandisa ngemibono yakhe, Land of the King's Thirst, 'Le ndawo ifana nenkositini. Uma ufuna ukuhlala ngaphakathi kwemingcele yakho unayonke indlela eya ku-Vredendal. Kodwa uma ungafisi ukubizwa ngokuthi i-Namaqualander ugcina ekupheleni kweGaries, futhi yilokho. '
Uma sikhuluma ngokwezimila, i-Namaqualand ichazwe ngokuthi 'ingxenye yeSucculent Karoo ethonywe kakhulu imvula yasebusika nenkungu'. Kulandela le ncazelo, umngcele oseningizimu weNamaqualand uvela emlonyeni weMfula i-Olifants, eduze kweVredendal, kuze kube semaphethelweni eNtaba yeMatsikamma eVanhyhynsdorp. Umngcele osempumalanga ulandela undi weBokkeveld, ohamba phakathi kweNieuwoudtville neLoeriesfontein, ukusuka lapho enyakatho-ntshonalanga, yonke indlela eya ogwini eLüderitz eNamibia.
Nokho, kusukela kwezombangazwe, uMasipala wesifunda saseNamaqua uhlanganisa izindawo eziningana zemvelo ezihluke kakhulu kuSucculent Karoo. Ngakho, enyakatho, iqhubekela phambili emgwaqweni womfula i-Orange, ukusuka e-Alexander Bay kuya ePofadder (e-Bushmanland). Ngasentshonalanga, kulandela ulwandle lwe-Atlantic kuze kufike eqenjini elingamakhilomitha angamashumi amathathu nanhlanu eningizimu yeGaries. Kusukela lapha, iqhubekisa empumalanga futhi cishe eningizimu eHantam Karoo (kubandakanya amadolobha aseLoeriesfontein, eNieuwoudtville, eCalvinia, eSutherland naseFraserburg).
Ukubona Izimbali Zentwasahlobo
Okokugcina, ngokuphathelene nezimbali zasendle, lezi zenzeke esifundeni saseNamaqualand, kufaka phakathi i-Richtersveld ebonakala ingenalutho. Uthola futhi izimbali zasendle eningizimu yeVanhyhynsdorp, okuyizici noma ingxenye zembali zaseKapa (noma iFynbos). Nakuba zihlukene ngamakhilomitha angamakhulu amaningana, amadolobha aseSpringbok naseNieuwoudtville ngokuvamile asebenza izikhungo zangempela ezenzakalweni zezimbali zasentwasahlobo.
I-Namaqua National Park ekhulayo, eduze kwedolobha laseKamieskroon, ingenye indawo enhle yokubuka imbali. Izindawo ezivelele kakhulu zezimbali ngaphandle kweNamaqualand zitholakala ezintabeni zaseCederberg, eduze nogu oluzungeza i-Elands Bay naseWest Coast National Park eLangebaan (Indawo eseduze neKapa).